Fiarovana amin'ny sakafo - BALLYA
Ny fikarohana ara-pitsaboana dia mitaky kaonty amin'ny fitsaboana tsy azo sitranina
Ny fanandramana point-of-care dia fanao mahazatra amin'ny fikarohana ara-pitsaboana. Ity karazana fitsapana ity dia ampiasaina handinihana ny vokatry ny fanafody sy ny akora simika amin'ny marary nomena azy ireo. Ity karazana fitsapana ity dia ampiasaina ihany koa hamaritana ny fiarovana ny fitaovan'ny mpitsabo sy ny fitaovan'ny fikarohana. Nandritra ny am-polony taona maro, ny orinasam-panafody dia nitazona […]
Fomba hisafidianana sakafo mifameno
Ny halavan'ny zaza, ny lanjany ary ireo mari-pamantarana hafa dia mifandraika mivantana amin'ny zavatra hohanina, ohatrinona no hohanina ary ahoana no hanina. Betsaka ny zaza no mpihinan-kanina, tsy mahazaka anera, ary mihinana bebe kokoa aza nefa tsy ampy sakafo. Ny antony dia ny ankamaroan'ny hoe ny sakafo fiderana dia tsy mety! Ny famenon-tsakafo fanampiny dia tsy vitan'ny hoe manome fahafaham-po ny sakafo mahavelon-jaza fa […]